Ecstacy ဟာ မူးယစ်ဆေးတော့ မဟုတ်ပါ တငွေ့ငွေ့လေးနဲ့ ပျော်လာမှာ…. ဒါဒါ …… ဒီ…ဒါဒ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » Ecstacy ဟာ မူးယစ်ဆေးတော့ မဟုတ်ပါ တငွေ့ငွေ့လေးနဲ့ ပျော်လာမှာ…. ဒါဒါ …… ဒီ…ဒါဒ
Ecstacy ဟာ မူးယစ်ဆေးတော့ မဟုတ်ပါ တငွေ့ငွေ့လေးနဲ့ ပျော်လာမှာ…. ဒါဒါ …… ဒီ…ဒါဒ
Posted by cobra on Aug 30, 2010 in News |3comments
လူငယ်များ၊ လူလတ်များ၊ တိတ်တိတ်ပုန်းချေပုန်းခုတ်နေကြတဲ့ လူကြီးများအတွက်ပါ အားလုံး အသုံးဝင်ပြီး၊ ဆင်ခြင်ရမဲ့ ဆောင်းပါးသတင်းလေးပါဗျာ..။ အသိရှိတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ရှောင်စရာပါ..။ အဲ.. သုံးစွဲလိုသူတွေ အတွက်တော့ ဆေးညွှန်းမဖြစ်စေလိုပါ..။
ဒီဆေး အကြောင်းကို သူငယ်ချင်း တယောက်ပြောဖူးလို့ ကြားတော့ ကြားဘူးတာ အမှန်ဘဲ ဒီလိုအသေးစိတ်ကိုတော့ မသိပါဘူး။ သူကိုယ်တိုင် ဆေးချတယ်လို့ ပြောသွားတာ အဲဒီတုန်းက ဘာမှန်းမသိတာနဲ့ ဆေးသောက်တယ်ဆိုတာ ခေါင်းခါချင်လို့ သောက်တာလို့ဘဲ ထင်ထားတာ အခုမှ အဲဒီလိုမှန်းသိတာ ဗဟုသုတ တခုတော့ တိုးတာပေါ့